लघु कथा -फूल| Nepal Pati
- सुरेन्द्र शाही -गुलाब कान्छो
सर ! म निकै अन्योलमा छु भन्या अचेल – खै कसरी भनु म हजुरलाई। मेरो मनको कुरा।
के हो भनत कतै म सङ्ग उपाय छ भने सघाउछु नी ! काले लज्जित स्वरमा केहीकुरा लुकाउन खोजेजस्तो गरि बोल्यो । मैले पनि उसको कुरा नसकिदै बोलिहाले बिचैमा । गहुँ गोरो अग्लो र सग्लो पातलो चिटीक्क मिलेको मान्छे जस्कोनाम गोरे हुनुपर्थ्यो उसकै नाम काले। मान्छे निकै मिजासिलो र फरवार्ड छ मनपनी स्वच्छ र निश्चल हो उसकै नाम काले।कोहि कोहि त मायाले कालुपनि भन्छन्।
के माया गर्नु पाप हो र सररु काले बोल्यो- होइन । छोटो जवाफ दिए मैले- उसो हो भने मैले आजभन्दा दश वर्षपहिले देखि माया गरेको मान्छे किन जाबो चारपाँच महिना भेट त के फोनबाट र फेसबुकबाट लगाएको नाटकिए मायामा किन ? सर किन ? निकै जोसमा तर होस गुमाएर हाउभाउ सहित बोल्यो काले
हेर काले कलियुग हो यो यहाँ माया मनदेखी मन सङ्ग साटीनुपर्थ्यो तर अचेल धन र रुपसङ्ग साटिन्छ त्यो पनि धन र सुन्दर मुहारमा चाउरी नपरुन्जेलसम्म बुझिस् । हो यसैको उदाहरण मध्येको एक हुँ म। त पीर नगर कुनै दिन तेरै पछि लाग्नेछ भुल गरे मैले माफ पाउँ भनेर। म कालेलाई सम्झाउदा सम्झाउदै बहकिएको पत्तो नै भएन।
सर ! हजुर त भावुक पो बन्नुभयो। सरी सर मेरो कुरोले हजुरको चित्त दुखेजस्तो छ । काले बाेल्याे । होइन काले तेरो जस्तै कथा छ मेरो पनि। तँलाई म सानैदेखि चिन्छु। मपनी गरीब परीवारको सदस्य हुँ। मैलेपनी कसैलाई मन पराउथेँ तैले जस्तै धेरै माया गर्थे र चाहान्थे पनि। एउटा नाथे गमलामा फूलेको गुलाबलाई मन पराएर हिलोमा फुलेका कैयौं सुगन्धित कमलफूल लत्याए मैले।
बल्लपछी थाह भो जव म पिडामा थिए त्यही धनरुपी गमलामा सुन र चाँदीका काँडाले सजिएको गुलाबले यथार्थमा कहिल्यै नभुल्ने घात दियो। हामी धन नहुनेका लागि माया पनि घाँटीहेरी टाइ कस्नुू भनेजस्तै हो। यी मलाइ हेर अचेल म कति खुशी छु हिलोको कमल सङ्ग नाता साइनो जोडेर। आखिर तेरो माया पनि आकाशको फल आँखातरी मरू जस्तै भयो। पीर नगर काले गमला भए बोटसर्न आफै आउँछ। अर्को कुरा लेखेपढेको छस मोबाइल सद्दे भए सिम जति पनी फेर्न पाइन्छ यो कुरो बुझिराख। बोल्दा बोल्दै लामो सुस्केरा हालेर चुप लागे म।
म भन्दा ठूलो फन्दामा पर्नु भएको रहेछ हजुर सर। यति धेरै सम्झाउनु भयो मलाई त अमृत पिए सरीभो। अर्को कुरा हजुर त मेरो गुरु पो निस्किनु भयो सर। म पनि कोसिस गर्नेछु भुल्नलाई बिस्तारै। बिस्तारै होइन छिट्टै बिर्सिदे फाटेको जुत्ता लगाइस भने लाउने कै लाज हुन्छ देख्नेको होइन। कालेको बोली नसकिदै मेरो मुखबाट बोलिको गोली निस्किहाल्यो।
हस सर! हस ! दुबै हात जोडेर आँशुले भरीएका नजरलेम लाई हेर्दै बोल्यो काले । म भने किङ्कर्तब्यबिमुठ भए।